Home Wararka Qoys wada-dhashay oo aano qabiil loogu dilay Gobolka Mudug
Qoys wada-dhashay oo aano qabiil loogu dilay Gobolka Mudug
Deegaanka Saax-qurun oo hoostega Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka dhacay weerar qorsheysan oo lagu dilay dad isku qoys ahaa ee deganaa halkaas. Rag ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa weerarka ku qaaday dad isku qoys ah oo isugu jiray 2 Caruur ah iyo Aabahood oo ku sugnaa guri ay lahaayeen oo ku yaalla duleedka deegaanka Saax-qurun ee Mudug dhinaca Maamulka Galmudug.
Waraka ka imaanaya degaanka Saaxa- Quran ayaa sheegaya in laba Carruur iyo Aabahood oo lagu magacaabi jiray Xasan Diiriye Cilmi Waalid ayaa ku geeriyooday weerarka oo loo adeegsaday qori AK-47, isla markaana waxaa uu ku dhaawacmay wiil yar oo 8-sanno jir ah.
Dhanka kala Goobjoogayaal ayaa sheegaya in marka weerarka dhacayay goobta ka maqneyd Hooyada Carruurta dhashay, waxaana markii dambe halka uu falka ka dhacay tegay qaar kamid ah dadka Saax-qurun oo Xarun Caafimaad geeyay Wiilka yar ee dhaawacmay. Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in weerarka khasaaraha geystay ee ka dhacay deegaanka Saax-qurun ee hoostega Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug uu la xiriiro aano qabiil oo horey uga dhacday halkaas.
Waxaa la rumeysan yahay in qoyskaas oo dilay aano qabiil, wali ma cada cida ka danbeeysay falkaas argagaxa leh.
Previous articleWasiir Sahra-Kiin oo si adag ugu jawaabtay culumaa’udiinka Puntland
Next articleSafarka Rooble ee Garbahaareey oo qarka u saaray fashil & Faragalinta Farmaajo
Madaxweyne is casil aan inta hartay Ceyminee!! FADLAN IS CASIL